Al-xusari Quran Online Oo fursad Qaaliya U Haya Qurbajoogta Somaliyed iyo Caruurtooda
Wednesday January 06, 2021 - 11:34:11 in Wararka by Wariye Tiriko
Al-xusari Quran Online Oo fursad Qaaliya U Haya Qurbajoogta Somaliyed iyo Caruurtooda WhatsApp: +252634739046 IMO: +252634739046 Al-xusari Quran Online waa dugsi quraan online ah oo loogu talo galay qurbajoogta soomaaliyeed, meelkasta oo ay kaga nool yihiin adduunka . Dugsiga waxa wax ka baran kara Caruurta iyo dadka waaweyn labadaba.
Dugsigu waxa uu fursado gaar ah u hayaa waalidiinta qurbaha kunool ee dhibka badani ka haysto tarbiyadda caruurta, waxaanu diyaar u yahay inuu kala qaybqaato oo uu ka saacido dhinaca waxbarashada iyo tarbiyadda caruurta.
Koorsoyinka dugsiga lagu barto waxa kamid ah: – 1) Quraanka kariimka ah 2) Higaadda 3) Carabida 4) Xadiithka 5) Caqiiqda islaamka 6) Fiqhiga 7) Siirada nabiga (Scw) 8) Tarbiyadda caruurta 9) Baridda caruurta (Salaadda iyo axkaamta islaamka) 10) Tafsiirka iyo tajwiidka quraanka 11) Kobcinta Afsoomaaliga (Afka hooyo) 	Dugsigu waxa uu kuu diyaariyay macalimiin aqoon buuxda u leh casharada ay bixinayaan . 	Manhaj tayo waxbarasho leh oo sifudud ay ardaydu u baranayaan diinta islaamka.
	Arday walba waxa loo dhigayaa wakhtiga ugu haboon ee uu rabo inuu class ka qaato.
Hadda la xiriir maamulka oo is dinwaangali : WhatsApp: +252634739046 Imo: +252634739046 Viber: +252634739046 Skype: Al-xusari Quran Teaching Gmail: alxusari144@gmail.com